खादा, माला र आसनग्रहणलाई नियन्त्रण गर्दै अब एमालेले आफूलाई सच्याउने भएको छ । पोखरामा ९ गते सुरु भई हिजो सम्पन्न मोर्चा संगठनको राष्ट्रिय भेलाको घोषणापत्र जारी गर्दै भनिएको छ, ‘हामी औपचारिक कार्यक्रममा अनावश्यक तडकभडकलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । अतिथिलाई लगाइदिने ब्याच, माला र खादाको अत्यधिक प्रयोगबाट हाम्रा कार्यक्रम भद्दा एवं खर्चिला भइरहेका छन् । हामी यस्ता परम्परा र मञ्चमा ठूलो संख्यामा अतिथिको भीड… विस्तृत समाचार
खाजै खान हो त मन्त्रीज्यू ?
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र सचिव शंकर कोइरालाको यातना सहन नसकेर सहसचिव यामलाल भुसाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण जाने भएका छन् । घरेलु विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा तनहुँकै एक जनालाई नियुक्ति गर्न रामचन्द्रले दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको कुरा मिल्दैन तर काम एउटै छ, कर्मचारी हप्की–दप्की गर्ने । यस्तै भएर उद्योग विभागबाट उपसचिव विपिनराज भण्डारी सरुवा मागेर वातावरण मन्त्रालय गएका छन् । सहसचिव विनोद घिमिरे… विस्तृत समाचार
निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था मानिएको नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले गत साता सम्पन्न ६६ औँ साधारणसभामार्फत व्यापारिक तथा उच्च घरानालाई सम्मान ग¥यो । उद्योग वाणिज्य महासंघका सबै कर्मचारीले यो समाचार थाहा पाउन जरुरी ठान्दैनन्, किनकि त्यहाँका विभिन्न आयोजनामा संलग्न कर्मचारीको मूल्य र महत्व किन बुझ्नुप¥यो अध्यक्ष, उपाध्यक्षले ? व्यापारी न हुन्, प्रधानमन्त्री बोलाएर पाँचतारे होटलमा सभा–सम्मेलन गरे भइहाल्यो । कुलमान घिसिङ पनि त्यहाँ सम्मानित भए, त्यहीँ… विस्तृत समाचार
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरिदिए पनि संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दलले आनाकानी गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले नियुक्ति नै बदर गरिसकेको अवस्थामा महाअभियोग लगाइरहनु नपर्ने कांग्रेसको दलिल छ । तर, संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिका कतिपय सदस्यले भने लोकमानले विगतमा गरेको कृत्यका लागि कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । लोकमानले समानान्तर सत्ता चलाएको भन्दै एमाले र… विस्तृत समाचार
दन्ता, सीता, वसन्ता र फाइटिङ अनन्त
कन्याहरूका बीचमा किचलो चल्यो । खबर सुनाउन पुगेका युवतीलाई गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले भने, ‘किचकिच नगर न यार, म जान्नँ क्या !’ अहिले पनि नेविसंघ नेत्री सीता मिजार अस्पतालमा छिन् । रामचन्द्र पौडेल दिनदिनै अस्पताल पुगेर ‘के गर्नुपर्ने हो ? तपाईं त भन्नु पनि हुन्न’ भन्दै फर्किने गरेका छन् । पद्मकन्या क्याम्पसमा माओवादीसम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीको आक्रमणमा परेर सीता अस्पताल भर्ना भएकी हुन् । दुईवटा दाँत कामै… विस्तृत समाचार
मन्त्री उता, बोलाउने बेपत्ता
कपाल मिलाउँदै र झण्डा हल्लाउँदै राज्यमन्त्रीले त्रिशुली काटिन्, तर बाटोबाटै फिर्ता ! कारण थियो, बोलाउनेहरू नै बेपत्ता ! कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङ अस्ति सम्पन्न गोरु जात्रामा भाग लिन जाँदै गर्दा उनलाई रिसिभ गर्न आयोजकहरू नआइदिए पछि हिस्स परेर फर्किनुपरेको हो । हरेक वर्ष माघ एक गते नुवाकोटको तारुकामा गोरु जुधाइन्छ । यसपालि आयोजकले एमाले र कांग्रेसका नेतालाई लगे । तर, बोलाएर पनि राधिकालाई बेवास्ता गरेपछि… विस्तृत समाचार
एमालेभित्र छिर्न खोज्यो दक्षिण
नेपालमा भारतीय योजनाका त्यस्ता केही विषय बाँकी छैनन्, जो उसले कुनै न कुनै बाटोबाट छिराएको नहोस् । तर, एउटा विषयलाई कहिले यो त कहिले त्यो बाटोबाट छिराउने प्रयास असफल हुँदै आएको छ । संसद्भित्र ‘टङस्लिप’ भएर माधव नेपालले पार्टी एकलकाँटे शैलीको आलोचनामा बोलेको कुराबाट हौसिएका दक्षिणी खेलाडीले हिसाब–किताब निकालेरै हुनुपर्छ, प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका बेला जम्मा दुई जनालाई मात्र भारत भ्रमणको निम्तो दिइयो र दुबै… विस्तृत समाचार
घुमिफिरी फेरि सत्ताको घमासान
आजभोलिमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ सत्तासमीकरणको ढाँचाबारे केही बोलिहालेछन् भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । निर्वाचन आयोगले समय मागेजस्तो एक सय २० दिन, अर्थात् आजै घोषणा गर्दा पनि मध्यवैशाखतिर कुनै एक निकायको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था त छ । तर, समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा कम्तीमा १५ गतेसम्म पनि सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने छाँट छैन । यदि, घोषणा भइहाले जेठ पहिलो साता निर्वाचन हुन पनि सक्छ… विस्तृत समाचार
ओहो, खानेबाटो कस्तो अचम्मको
बद्मासी पनि कस्तो ! ज्योति बानियाँहरूले दुःख गरी–गरी फटाहा र उपभोक्ता ठग्नेविरुद्ध मुद्दा तयार गर्ने । तर, अदालतमा मुद्दा दायर हुने नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चको नामबाट । त्यहाँका गोप्य डकुमेन्ट खुसुक्क चुहाएर पति परमेश्वरसम्म पु¥याउन सक्रिय संस्थाकी सचिव विमला खनाल । उनका पति रञ्जन खनालको संस्था हो नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च । २५ प्रतिशत आकर्षक कमिसनको लोभमा त्यहाँका मुद्दाको सूचना उता पु¥याउने विमला अहिले ज्योतिहरूको… विस्तृत समाचार
मन्त्रीको ढिलो आउने मन
शुक्रबार त्रिपुरेश्वरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल अकोराबको अधिवेशन थियो । सोचें रेडियोकर्मीको कार्यक्रम समयमै शुरु होला, त्यही भएर बेलैमा पुग्न कोसिस गरें । बिहान साढे ८ बजे शुरु हुने भनिएको कार्यक्रम, पुग्दा पौने ९ बजिसकेको थियो । हल करिब–करिब सुनसान थियो । प्रमुख अतिथि सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की चौतारीका केही पदाधिकारीबीच चिया तान्दै थिए । अरु आयोजक प्रमुख अतिथिलाई कुरेर एक÷डेढ घण्टा ढिलो कार्यक्रम शुरु… विस्तृत समाचार